Kedu ihe ọla platinum pụtara na Cambodia? - Nyocha sayensị
Dabere na ihe anyị kwuru n'oge ọmụmụ anyị, enweghị ezigbo ọla platinum na Cambodia. Ndị Cambodia na-eji okwu ahụ bụ "Platinum" ma ọ bụ "Platine" eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi iji kọwaa ngwakọta ígwè nke nwere pasent ọlaedo ụfọdụ.
Anyị zụtara ọla ọcha nke platinum n’obodo dị iche iche na ọtụtụ ụlọ ahịa dị iche iche iji mata nke ọma na ihe igwe a bụ. Anyị gere onye ọ bụla na-ere ahịa iji ghọta nkọwa ha, yana ndị a bụ nsonaazụ anyị nwetara.
Ihe onu ogugu anyi nyere bu nke anyi gogoro anya, ihe omuma a bukwara nke oma. Agbanyeghị, nsonaazụ nke nyocha anyị apụtaghị na nsonaazụ niile nke ndị na-achọ mma, enwere ike ịnwe ike.
Gịnị bụ ezigbo platinum?
Platinum Standart (akara 3)
Nọmba Platinum 5 na 7
Nọmba Platinum 10
Uru na ọghọm dịịrị ndị na-achọ mma
Uru maka ọla
Diskọ ihe ụfọdụ maka ndị ọla
Uru na ọghọm dịịrị ndị ahịa
Uru maka ndị ahịa
Ọghọm maka ndị ahịa
Real platinum bụ ihe na-agụ, ductile, na malle, ọla ọcha na-acha ọcha. Platinum dị ductile karịa ọla edo, ọla ọcha ma ọ bụ ọla kọpa, si otú a bụrụ ductile nke ọla ndị kachasị mma, mana ọ dị obere obere karịa ọla edo.
Platinum bụ ihe kemịkal nwere akara Pt na ọnụọgụ atomic 78.
Ruo ugbu a, anyị ahụbeghị ezigbo ọla platinum na ụlọ ahịa ọla ọ bụla dị na Cambodia. Mana nke ahụ apụtaghị na ọ gaghị ekwe omume ịchọta
Ndị Cambodia na-eji okwu ahụ bụ "Meas" ekwu maka naanị ọla edo dị ọcha. Ma ọla edo dị ọcha dị nro maka ngwa ọla.
Ọ bụrụ na ejiri ọla edo na ọla ndị ọzọ mee ọla, a naghị ewere ya dịka “Meas”, mana dị ka “platinum”.
Ọ dịghị onye maara ezigbo mmalite ojiji nke aha "Platine", mana anyị chere na ọ bụ ihe mgbakwasị ụkwụ nke okwu French "Plaqué" ma ọ bụ okwu Bekee "Plated", nke pụtara na ọla dị na Cambodia jiri ọla dị oke ọnụ kpuchie ya. , ebe enwere igwe dị ọnụ ala n’ime. Anyị were ya na ihe ọ pụtara gbanwere ka oge na-aga.
N'ezie, ndị Kambodia na-eji aha French “Chromé” ekwu okwu banyere ọla plated.
Na-ege ntị na nkọwa ndị na-ere ahịa, platinum ọkọlọtọ bụ nọmba platinum 3. Ihe ekwesiri ịpụta na 3 / 10 nke ọla edo, ma ọ bụ 30% nke ọla edo, ma ọ bụ 300 / 1000 nke ọla edo.
N'ezie, ule anyị niile rụpụtara na-erughị ọlaedo 30% na ihe ịchọ mma ndị a, dịka ị na-ahụ n'okpuru, nkezi bụ 25.73%. Nke a nwere ike ịdị iche site na pọọsụ ole na ole n'etiti ụlọ ahịa dị iche iche, ma ọtụtụ mgbe pasent nwere ike ịdị iche maka ọla si n'otu ụlọ ahịa.
Nwara site na: Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF)
Ọla kọpa 60.27%
Ọla edo 25.73%
10.24% ọla ọcha
Ọ bụrụ na anyị atụnyere ọnụọgụ ndị a na ụkpụrụ mba ụwa, ọ pụtara na ọ bụ ọla edo 6K ma ọ bụ ọla edo 250 / 1000
Ọdịdị igwe anaghị adị na mba ndị ọzọ, maka na obere ọla edo ejiri dịka mba ụwa bụ 37.5% ma ọ bụ 9K ma ọ bụ 375 / 1000.
Na-ege ntị na nkọwa nke ndị na-ere ere:
Nọmba Platinum 5 kwesiri ịpụta na 5 / 10 nke ọla edo, ma ọ bụ 50%, ma ọ bụ 500 / 1000.
Nọmba Platinum 7 kwesiri ịpụta na 7 / 10 nke ọla edo, ma ọ bụ 70%, ma ọ bụ 700 / 1000.
Ma ihe ọ rụpụtara dị iche
Ọla edo 45.93%
Ọla kọpa 42.96%
9.87% ọla ọcha
Ọla edo 45.82%
Ọla kọpa 44.56%
7.83% ọla ọcha
Maka ọnụọgụ 5, nsonaazụ ahụ erughị ka o kwesịrị ịdị, mana ọ na-anabata ya, agbanyeghị, ọdịiche ahụ doro anya maka ọnụọgụ 7.
Ọnụ ọgụgụ ọla edo bụ otu n'etiti nọmba 5 na 7, mana agba nke metal dị iche. N'ezie, site na ịgbanwe oke nke ọla kọpa, ọla ọcha na zinc, agba nke igwe agbanwe.
Ochicho di ala maka otutu platinum 5 na 7. A naghị ere ọla dị ka ngwaahịa ọkọlọtọ na Cambodia. Ọ na-adịkarị mkpa ịtụ ya nke mere na ndị na-ere ahịa na-emepụta ọla ahụ maka ndị ahịa.
Nọmba Platinum 10 bụ ezigbo ọla edo, ebe ọ bụ na o kwesịrị ịbụ 10/10 ọla edo, ma ọ bụ 100% ọla edo, ma ọ bụ 1000/1000 nke ọla edo.
Mana n'eziokwu, nọmba platinum nke 10 adịghị, n'ihi na n'ọnọdụ ahụ, ọla edo dị ọcha ka akpọrọ "Meas".
Cambodia na nke mba ụwa
E jiri ya tụnyere ụkpụrụ mba ụwa, platinum nke Kambodian tụnyere ọla edo. Alloy nwere nnukwu ọla kọpa. Ọ bụkwa ụzọ kachasị ọnụ ala iji mee ọla edo, maka ọla kọpa dị ọnụ ala karịa ọla ndị ọzọ eji ọla edo.
Ọla edo edo nke ọkọlọtọ mba ụwa nwere ọla kọpa pere mpe kama ọtụtụ ọla ọcha karịa ọla edo na-acha ọbara ọbara.
Oke ọla edo bụ ihe dị n'etiti etiti edo edo na ọla edo edo, yabụ enwere ọla kọpa karịa ọla edo edo, mana ọla kọpa pere mpe karịa ọla edo.
Ozi ndị a nwere ike ịdị iche site n'otu ụlọ ahịa ọzọ.
O yiri ka ụfọdụ ndị na-achọ mma ndị Kambodia maara na alloys ha enweghị nke ọma na ha nwekwara ụkpụrụ mba ụwa.
Anyị nụrụ banyere "Meas Barang", "Meas Italy", "Platine 18" ..
Aha ndị a nwere ike nwee nkọwa dị iche iche. Ndị na-ere ahịa nke ọ bụla nwekwara nkọwa dị iche.
"Meas Barang" bu ọla edo ala ozo
"Meas Italy" pụtara ọla edo Italy
"Platine 18" pụtara ọla edo 18K
Mana site na ihe anyị nụrụ, aha ndị a na-akọwapụta ọla, oge ụfọdụ ọrụ ọrụ ọla. Banyere nọmba platinum 18, ọ baghị uru ma e jiri ya tụnyere nọmba ndị ọzọ ebe ọ ga - apụta na ọ bụ 180% ọla edo dị ọcha.
Tradingzụ ahịa Platinum
Thelọ akụ na-akwụ ụgwọ dị ọhụrụ na Cambodia. Ndi Kambodia na etinye ego ha na ulo na mbu. Ha na-azụkwa ọla dị ka obere ma ọ bụ obere oge iji zere itinye ego ha na-enweghị isi.
N’ezie, imirikiti mmadụ anaghị enwe ego iji tinye ego na ihe ọ bụla, mana ozigbo ha nwere ntakịrị ego echekwara, ha na-azụta ngwa ngwa platinum, olu ma ọ bụ mgbaaka.
Otu ọ bụla, ezinụlọ ọbụla na-abanye n'otu ụlọ ahịa maka na ha tụkwasịrị onye nwe ha obi.
Imirikiti ndị mmadụ anaghị aghọta ihe ha na-azụ mana ha achọghị ịma n'ezie n'ihi naanị ozi abụọ ha chọrọ ịma bụ:
Ego ole ka ọ dị n'ụsọ osimiri?
Ego ole onye ahia ahia ga-azụta ọla ahụ mgbe ha ga-achọ ego?
Ná nkezi, onye na-ere ahịa na-azụta ọla ọcha platinum nke ihe dị ka 85% nke ọnụahịa mbụ ha. Nke a nwere ike ịdị iche site na ụlọ ahịa
Onye ahia ahia aghaghachitela ọla eji ngwa okike jiri ugwo jiri ya kwụọ ya ozugbo.
Ọ bụ ezigbo ego. Ọ dị mfe irite ego ugboro ugboro na otu ihe
Ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe n'ihi na ha enweghị ike ire ọla ha n'ụlọ ahịa ọzọ na Cambodia
Chọrọ otutu ego n'aka iji zụta azụ ahịa ndị ahịa. Ọ dị ize ndụ ma nwee ike ịdọta ndị ohi. Karịsịa tupu ezumike, mgbe ndị ahịa niile na-abịa n'otu oge n'ihi na ha chọrọ ego iji gaa n'ógbè ha.
Ọrụ siri ike na kwa ụbọchị n'ihi na onyeisi ga-elekọta ụlọ ahịa ahụ. O nweghi ndị ọrụ ruru eru maka ọrụ a
Ọ dị mfe iji weghachite ego
Achọghị ka ị bụrụ ọkachamara
Money ga-efufu ego mgbe ị na-ere ya
Ọ bụrụ na ịtụfu akwụkwọ ọnụahịa, ị ga-efufu ihe niile
Can gaghị ere ya azụma ahịa ọzọ
Ihe niile na-aga nke ọma ma ọ bụrụhaala na ụlọ ahịa ahụ mepere emepe. Ma ọ bụrụ na ụlọ ahịa emechie, gịnị ga-eme ọzọ?
Ebee ka ịzụta Khmer platinum?
Ga-ahụ ya ebe niile, n'ahịa ọ bụla n'obodo ọ bụla na Alaeze Cambodia.
Anyị na-ere Platinum Khmer?
O bu ihe nwute.
Anyị na-ere naanị gemstones sitere n'okike na ọla ndị dị mma gbaara ọkwa nke mba ụwa.
Anyị na-enyekwa iji chepụta ma mee ọla edo nke ịchọ mma gị na ọla ọ bụla dị oke ọnụ ahịa, na nke ọ bụla, gụnyere ezigbo Platinum.
Any ị nwere olile anya na ọmụmụ ihe anyị enyerela gị aka.
Na-ele anya izute gị na ụlọ ahịa anyị n'oge na-adịghị anya.